ရှယ်ဆော့ရှယ်ရ မြွေလှေကားဆိုတာ MyTelenor App မှာသာရရှိနိုင်တဲ့ Telenor အသုံးပြုသူများအတွက် Lucky Draw Campaign တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Telenor မှထုတ်လုပ်ထားသော Package များကို၀ယ်ယူသူများသည် Telenor App တွင်ရှိသည့် Snake and Ladder ကိုဆော့ကစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကံထူးသူများကို ဖုန်းဟန်းဆက်၊ iPad၊ TV၊ လေယာဉ်လက်မှတ်များ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ လျှော့စျေးကူပွန်များနှင့် အခြားသောနေ့စဉ်ဆုမဲပေါင်း ၁၁၀,၀၀၀ ကျော်အပြင် ဆုကြီးများကိုမဲဖေါက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Air Ticket ကံထူးသူများစာရင်း
​အောက်​​ဖော်​ပြပါ ဆုများသည်​ ​နေ့စဉ်​ကံထူးနိုင်သည့် ဆုလက်ဆောင်များဖြစ်​ပါသည်​။
အနည်းဆုံး ၁၂၅၀၀ကျပ်​ဖိုး (အခွန်မပါ) အသုံးပြုပြီး ကြက်ပေါင်းဆီချက်​တစ်​ပွဲ အခမဲ့ ရယူပါ
အနည်းဆုံး ၁၂၅၀၀ကျပ်​ဖိုး (အခွန်မပါ) အသုံးပြုပြီး ကြက်​​သားဖက်ထုပ်တစ်​ပွဲ အခမဲ့ ရယူပါ
အနည်းဆုံး ၁၂၅၀၀ကျပ်​ဖိုး (အခွန်မပါ) အသုံးပြုပြီး စ တော်ဘယ်ရီရေခဲမုန့်တစ်​ပွဲ အခမဲ့ ရယူပါ
ပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်​အတွက်​ အနည်းဆုံး ၄သောင်းကျပ်​ ဖိုး အသုံးပြုပြီး ၅ထောင်ကျပ်​ သက်သာခွင့်ရယူပါ။
ပြည်​ပ​လေကြောင်းခရီးစဉ်​အတွက်​ အနည်းဆုံး ၁ သိန်းကျပ်​ ဖိုး အသုံးပြုပြီး ၁ သောင်းကျပ် ​သက်သာခွင့်ရယူပါ။
ဟိုတယ်များအတွက်​ အနည်းဆုံး၃သောင်းကျပ်​ ဖိုး အသုံးပြုပြီး ၅ထောင်ကျပ်​ ​သက်သာခွင့်ရယူပါ။
ခရီးသွားကား​အတွက်​ အနည်းဆုံး ၁သာင်းခွဲ ကျပ်​ဖိုး အသုံးပြုပြီး ၂ထောင်ငါးရာကျပ်​ ​သက်သာခွင့်ရယူပါ။
၁။ MyTelenor App မြွေလှေကားအစီအစဉ်မှ ကံထူးသော SMS ရရှိပါလိမ့်မည်။ ကူပွန်ကုဒ်ကိုမှတ်သားထားပါ။
၂။ အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပါ (မရှိလျှင် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ)
၃။ အပလီကေးရှင်း၏ ဘယ်ဖက်ဒေါင့်အပေါ်ရှိ မီနူးကိုနှိပ်ပါ။
၄။ မီနူး မှ "ပရိုမိုကုဒ်" ကိုနှိပ်ပါ။
၅။ အကောင့် မဝင်ရသေးလျှင် ဝင်လိုက်ပါ။
၆။ ကုဒ်ထည့်ရန်ပေါ်လာသောစာမျက်နှာတွင် SMS မှရရှိထားသော ပရိုမိုကုဒ်ကို ကူးထည့်ပါ။
Promotion Code အား ကောင်တာတွင်ပြပြီး discount ရယူပါ။
Promotion Code အားရရှိပြီးသည့်နေ့မှ ရ အထိသုံးနိုင်သည်။
Snake & Ladder ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။ တယ်လီနောမြန်မာ (“တယ်လီနော”) မှSnake & Ladderကံစမ်းမဲအစီအစဉ် (“ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်”)ကာလမှာဩဂုတ်လ ၁ရက် ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် စတင်ပြီးအောက်တိုဘာလ၂၉ရက် ၂၀၁၉ခုနှစ်အထိ (ထပ်မံသက်တမ်းတိုးရန် မကြော်ငြာသရွေ့) (“ကံစမ်းမဲကာလ”) ဖြစ်သည်။တယ်လီနောဝန်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူများမှ Dice Counts များအားအောက်တိုဘာလ၂၉ရက်၂၀၁၉ခုနှစ် ည ၂၃နာရီ ၅၉ မိနစ်(မြန်မာစံတော်ချိန်) မတိုင်မီသုံးစွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ကံစမ်းမဲကာလကျော်လွန်သည်အထိမသုံးစွဲရသေးသောDice Counts များမှာဤ ကံစမ်းမဲ အစီစဉ်နှင့် အကျုံး မဝင်ပေ။ကံစမ်းမဲကာလအားတယ်လီနောမှ မိမိတဦးတည်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၂။ဤကံစမ်းမဲအစီစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းမှ တယ်လီနောSnake & Ladderကံစမ်းမဲအစီအစဉ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (“စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ”)၊ ပြင်ဆင်ချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအားလိုက်နာရန် သဘောတူညီသည်ဟုမှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ပြင်ဆင်မှု တစုံတရာရှိပါက My Telenor application မှတဆင့် ကြော်ငြာမည်ဖြစ်ပြီးကြော်ငြာသည်နှင့် တပြိုက်နက် အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ တယ်လီနောမှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများအစားထိုးခြင်းအပါအဝင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်ဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲချက်အားကြော်ငြာသည်နှင့် တပြိုက်နက် အကျိုးသက်ရောက်မည် ဖြစ်သည်။
၃။ ဤကံစမ်းမဲအစီအစဉ်သည် တယ်လီနောဖုန်းများ၏ ကြိုတင်ငွေဖြည့်သွင်းသည့် ၀န်ဆောင်မှု (prepaid) သုံးစွဲသူအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။(“တယ်လီနော၏ ၀န်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူ”) ဤကံစမ်းမဲအစီအစဉ်သို့ ၀င်ရောက် ကံစမ်းချင်သူတယ်လီနော၏ ၀န်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများသည် “My Telenor” application အား ၄င်းတို့၏ မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် သုံးစွဲရန် လိုအပ်သည်။
၄။ အောက်ပါ ပုဂိုလ်များအားဤကံစမ်းမဲအစီစဉ်တွင်ပါဝင်ခြင်းအားတားမြစ်ထားသည် (“ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ခြင်းအားတားမြစ်ထားသူများ”)
(က) တယ်လီနော ၏ အချိန်ပြည့်၊ အချိန်ပိုင်း၊ ယာယီ၊ အမြဲတမ်း ၀န်ထမ်းများ
(ခ) တယ်လီနောအားဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသူများ (Service Provider) ၊တယ်လီနောနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသောမိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများ (Business Partner) နှင့် ၄င်းတို့၏ ၀န်ထမ်းများအား
(ဂ) တယ်လီနော၏ Productနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း (sale or distribution) တို့တွင်ပါဝင်သူများနှင့် ၄င်းတို့၏ ၀န်ထမ်းများအား ဤကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ၀င်ရောက်ကံစမ်းခြင်းအား တားမြစ်ထားသည်။
၅။ ကံစမ်းမဲမှ ဆုတစ်ခုကိုဆွတ်ခူးရရှိပြီးသူအပါအဝင်၊ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်သည့် မည်သူနှင့်စပ်လျင်း၍မဆိုတရားဝင် အတည်ဖြစ်မှုအားတယ်လီနောမှ မိမိတစ်ဦးတည်းသဘောဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ခြင်းအားတားမြစ်ထားသူများမှကံထူးခဲ့ပါကလက်ဆောင် ပစ္စည်းများအားတယ်လီနောမှမိမိသဘောဖြင့် ပြန်လည်သိမ်းယူခွင့်နှင့် ပယ်ဖျက်နိုင်ခွင့်တို့ရှိသည်။
၆။တယ်လီနောဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများသည်Flexi Planမှလွှဲ၍တယ်လီနော ၏ မည်သည့် ပက်ကေ့ချ် မဆို ၀ယ်ယူပြီးဤကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်နိုင်မည် ဖြစ်သည။် (“ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ခွင့်ရှိသူ”)Flexi Planသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဤကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရမည် မဟုတ်ပေ။ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ခွင့်ရှိသူသည် ပက်ကေ့ချ် ၀ယ်ယူသည့်ငွေပမာဏအလိုက် ကံစမ်းမဲကာလတွင် ကံစမ်းမဲလက်မှတ်များအားရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သောကံစမ်းမဲလက်မှတ် အရေအတွက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
o ၃၉၉ကျပ် နှင့်အောက် = ကံစမ်းမဲလက်မှတ် (Dice Count) ၁ ခု
o ၄၀၀ - ၁၀၀၀ ကျပ် = ကံစမ်းမဲလက်မှတ် (Dice Count) ၂ ခု
o ၁၀၀၁ - ၃၀၀၀ ကျပ် = ကံစမ်းမဲလက်မှတ် (Dice Count) ၃ ခု
o ၃၀၀၀ ကျပ်အထက် = ကံစမ်းမဲလက်မှတ် (Dice Count) ၅ ခု
၇။တယ်လီနော ၏ မည်သည့် ပက်ကေ့ချ် မဆို ၀ယ်ယူပြီးသည်နှင့် ကံစမ်းမဲလက်မှတ်(Dice Count)အားMyTelenor Application ၏ ပင်မစာမျက်နှာရှိကံစမ်းမဲအစီအစဉ် ကြေညာထားသောနေရာကိုနှိပ်ပြီးရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကံစမ်းမဲလက်မှတ်များကိုပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူထားသည့်အချိန်မှစတင်ပြီး ၄၈နာရီအတွင်း MyTelenor Application တွင်ဝင်ရောက်ရယူနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ၄၈နာရီအတွင်းကံစမ်းမဲလက်မှတ်(Dice Count)ရယူခြင်းမရှိသောသူများအား ၄င်းတို့ ဝယ်ယူထားသည့်ပက်ကေ့ချ်အတွက် ကံစမ်းမဲလက်မှတ်(Dice Count)များအစား ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း၊ လျှော်ကြေးပြန်လည်ပေးခြင်းတို့ ရှိမည်မဟုတ်ပေ။
၈။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပိုဒ် (၇)နှင့်အညီစုဆောင်းထားသောကံစမ်းမဲလက်မှတ်များ(Dice Count)အားအစီအစဉ်ပြီးဆုံးရက်အထိသာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဤကံစမ်းမဲအစီအစဉ် ပြီးဆုံးပြီးနောက် သက်တမ်းကုန်သွားသောကံစမ်းမဲလက်မှတ်များ(Dice Count)အတွက် လျော်ကြေး ပြန်လည် ပေးအပ်မည် မဟုတ်ပေ။ကံစမ်းမဲလက်မှတ်တစ်စောင် (Each Dice Count)အတွက်MyTelenor Application တွင် ဝင်ရောက်ပြီးအံစာတုံးခေါက်ခွင့်တစ်ကြိမ်(Play the Dice) ရမည်ဖြစ်သည်။
၉။ ကဲစမ်းမဲအစီအစဉ် ၏ဆုလက်ဆောင်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
• YKKO ဒစ်စကောင့်ကူပွန်
• Owayကူပွန် လက်မှတ်
• Shop.com.mm တွင် အခမဲ့ လက်ဆောင်မှာယူရန် Digitalကူပွန်။အခမဲ့လက်ဆောင် တွင် အောက်ပါပစ္စည်းများပါဝင်သည်:
Grand Prizes (ကံစမ်းမဲကာလပြီးဆုံးမှ)
• Singapore Airline မှပေးအပ်သောစင်ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန် အသွားအပြန် လေယာဉ် လက်မှတ်
၁၀။Instant Reward ဆုများအတွက် ၀န်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများ၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ရှိ “My Telenor” app (Snake & Ladder) မှတဆင့် ကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ခွင့်ရှိသူ မှ ကံထူးသည်နှင့် တပြိုက်နက် ၄င်းကံထူးရှင်အား “My Telenor” app မှတဆင့် အသိပေးအကြောင်း ကြားမည် ဖြစ်သည်။ တယ်လီနောမှ ကံထူးရှင်ရရှိမည့် ဆုလက်ဆောင် ကူပွန် နံပါတ်၊ ၄င်းကူပွန်အား အသုံးပြုရန်အချိန်ကာလတို့အား၄င်း၏ ဖုန်းနံပါတ်သို့ SMSmessageပေးပို့သွားမည် ဖြစ်သည်။ဆုလက်ဆောင် ရရှိသူများအနေဖြင့် ၄င်းတို့ လက်ခံရရှိသည့် SMS တွင်ပါဝင်သည့် ဆုလက်ဆောင် ကူပွန်ကဒ်နံပါတ်အားတစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုခွင့် ရမည်ဖြစ်သည်။
၁၁။ OWAY ကူပွန် လက်မှတ်နှင့် YKKO ဒစ်စကောင့် ကူပွန်ကံထူးသူများအနေဖြင့် သက်မှတ်ထားသည့် ဆိုင်/နေရာများတွင် ၄င်းကူပွန်များအား အသုံးပြုခွင့် ရမည်ဖြစ်သည်။YKKO ဒစ်စကောင့် ကူပွန်အားSMS မှတဆင့် အကြောင်းကြားစာရရှိပြီး ရရက်အတွင်း အသုံးပြုှရမည်။ OWAY ကူပွန် နံပါတ်အားနိုဝင်ဘာလ ရရက် ၂၀၁၉ခုနှစ်မတိုင်ခင် အသုံးပြု ရမည်ဖြစ်ပြီးOWAY ၏ကူပွန် နံပါတ်အသုံးပြု၍ဝယ်ယူထားသောခရီးသွား လက်မှတ်များအား နိုဝင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့ ၂၀၁၉ခုနှစ် မတိုင်ခင် ခရီးသွားလာခြင်း အတွက် အသုံးပြုရမည် ဖြစ်သည်။
၁၂။ YKKO, OWAY, Shop.com.mm နှင့် Singapore Airline တို့အားမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများဟုခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့မှပေးအပ်သောYKKO ဒစ်စကောင့် ကူပွန်၊ Owayကူပွန် လက်မှတ်၊ Shop.com.mm တွင် လက်ဆောင် အခမဲ့ရယူရန် Digital ကူပွန် နှင့်Singapore Airline မှပေးအပ်သောစင်ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန် အသွားအပြန် လေယာဉ် လက်မှတ်တို့အားမိတ်ဖက် ကူပွန်များဟုခေါ်ဆိုမည် ဖြစ်သည်။မိတ်ဖက်ကူပွန်များအားငွေသားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးအပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ကံစမ်းမဲကူပွန် ၏ သက်တမ်း၊ အသုံးပြုရမည့် ပုံစံတို့မှာမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီတို့၏ သဘောထား/ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ၄င်းတို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ဖြစ်သည်။မိတ်ဖက်ကူပွန်နှင့် ပတ်သက်သည့်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများ၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအားအောက်ပါ လင့်ခ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည် https://www.telenor.com.mm/snakeandladder/term-condition။
၁၃။ Shop.com.mmမှတဆင့်မှာယူရမည့် အခမဲ့ ဒီဂျစ်တယ် ဆုလက်ဆောင်များအတွက် ကံထူးသူများမှာလက်ဆောင်မှာယူရန် လင့်နှင့်အတူကူပွန်ကုဒ်နံပါတ်တို့အား(“ဒီဂျစ်တယ် ကူပွန်”)လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ် ဆုလက်ဆောင်များအားမှာယူရန် ကူပွန်ကုဒ်နံပါတ်နှင့် လင့်တို့အားကံထူးသူများ၏ ဖုန်းနံပါတ်သို့ SMS မှတဆင့် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ကံထူးသူမှ ဆုလက်ဆောင်မှာယူရန် အတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များအားပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ် ကူပွန်သည် ဆုရရှိကြောင်းအကြောင်းကြားသည့် SMS ရရှိပြီး ၁၄ရက်အကြာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ် ကူပွန်အားဆုရရှိကြောင်းအကြောင်းကြားသည့် SMS ရရှိပြီးနောက် ၁ကြိမ်သာ အသုံးပြုခွင့် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
၁၄။ Singapore Airlineမှပေးအပ်သောစင်ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့် အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်အားအသုံးပြုပြီးခရီးသွားနိုင်သည့် ကာလမှာဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရက် ၂၀၁၉ခုနှစ် အထိဖြစ်သည်။ခရီးသွားမည့် နေ့မတိုင်ခင် ၁လကြိုတင် ၍လေယာဉ်လက်မှတ်အားထုတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဆုလက်ဆောင် ရရှိသည့် လက်မှတ်များအားလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ငွေပြန်အမ်းခြင်း၊ ငွေသားအစားထိုးပေးအပ်ခြင်း နှင့် အခြားလေကြောင်းလိုင်းနှင့် ပြောင်းလဲပေးခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရ။
၁၅။ တယ်လီနောမှ သက်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းအသုံးပြုခြင်းမရှိသောလက်မှတ် နှင့် ကူပွန်များအတွက် တာဝန်မရှိပေ။ ကံစမ်းမဲကူပွန် ၏ သက်တမ်း၊ အသုံးပြုရမည့် ပုံစံတို့မှာမိတ်ဖက်ကမ္ပဏီများ၏ သဘောထား/ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ၄င်းတို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ဖြစ်သည်။
၁၆။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ပေးပို့ရမည့် လိပ်စာမှားယွင်းခြင်း၊ မပြည့်စုံခြင်း၊လိပ်စာပြောင်းလဲခြင်း၊ အခြားအချက်အလက်များမပြည့်စုံသောကြောင့် ဆုလက်ဆောင်များမပေးပို့ နိုင်ခြင်း၊ ပေးပို့သည့် ဆုလက်ဆောင်များပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ပစ္စည်းများအသင့် မရှိခြင်းတို့အတွက် တယ်လီနောမှ တာဝန်မရှိပေ။
၁၇။ Grand Prizes ကံထူးရှင်များအားတယ်လီနော၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှတဆင့် ကြော်ငြာပြီးအသိပေးမည်ဖြစ်သည်။
၁၈။ တယ်လီနောမှGrand Prizeကံထူးသူများအားကံစမ်းမဲကာလပြီးဆုံးချိန်တွင် ကံစမ်းမဲတွင် တစ်ဦးချင်းဆီအလိုက် ဝင်ရောက်ကံစမ်းပြီးရရှိထားသော Grand Prizes ကူပွန်အရည်အတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးComputer စနစ်မှ တဆင့် ရွေးချယ်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် များများကံစမ်းလေဆုများများရလေ ဖြစ်သည်။ တယ်လီနောမှ ထို Grand Prize ကံထူးရှင်များအားကံစမ်းမဲကာလ ပြီးဆုံးချိန်မှ တပတ်တိတိသင့်တော်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်ပြီးထိုတပတ်အတွင်းဆက်သွယ်၍မရနိုင်သောကံထူးရှင်များ (သို့) တယ်လီနော၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလိုက်နာမှုမရှိသူများအားတယ်လီနောမှ သင့်တော်သည်ဟုထင်မြင််သည့်အတိုင်းမည်သည့် ဆုလက်ဆောင် ကိုမဆိုရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ထိုဆုလက်ဆောင်များအားပြန်လည် အသုံးပြုခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။
၁၉။ တယ်လီနောမှ ဆုလက်ဆောင်လာရောက် ပို့ဆောင်ပေးခြင်း (သို့) တယ်လီနောရုံးချုပ် Sule Square၊ အမှတ် ၂၂၁၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ လာရောက် ၍ ဖြစ်စေရယူရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တယ်လီနောမှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးပို့ ရန် (သို့) ကံထူးသူမှ တယ်လီနောရုံးချုပ်သို့ လာရောက်ရယူရန် အတွက်မူတယ်လီနောမှ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
၂၀။ ဆုလက်ဆောင်များလာရောက်ရယူရာတွင် တယ်လီနောမှ အမှန်တကယ် ကံထူးသူလာရောက် ထုတ်ယူသည်ဟုမှတ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ၄င်းတို့၏ အမည်၊ နောက်ဆုံးဖြည့်သွင်းခဲ့သည့် ငွေဖြည့်ကဒ် ပမာဏ၊ အများဆုံးခေါ်ယူသည့် ဖုန်းနံပါတ် နှင့် လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက် အချို့ကိုတောင်းခံမည်ဖြစ်သည်။ တယ်လီနောမှ မေးမြန်းသောမေးခွန်းများအားမှန်ကန်အောင် ဖြေဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသူအားတယ်လီနောမှဆုလက်ဆောင်ပေးအပ်ရန် ငြင်းပယ်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ဥပဒေအရအဆိုပါ ဆုလက်ဆောင်အားပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူဟုယူဆရန် မဖြစ်နိုင်သူများအားလည်းတယ်လီနောမှ ဆုလက်ဆောင်ပေးအပ် ရန်ငြင်းပယ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤစာပိုဒ်ပါ ဆုလက်ဆောင်များပေးအပ်ရန် ငြင်းပယ်ခွင့် ရှိသောအချက်များအရတယ်လီနောသည် မိမိကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆုလက်ဆောင်များအားရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ထိုဆုလက်ဆောင်များအား ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၂၁။ နည်းပညာချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အမှားများ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊ အချိန်ကြံ့ကြာမှုများ၊ အင်တာနက် နက်ဝက် မရခြင်း နှင့် တယ်လီနောမှ ထိန်းချုပ်ရန် မစွမ်းသာသောအခြေအနေများအစရှိသည်တို့ကြောင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် တွင် ပါ၀င်ကံစမ်းသည့်သူများအပေါ် သက်ရောက်မှု/ဆုံးရှုံးမှုတစုံတရာရှိခဲ့ပါကအဆိုပါ ဆုံးရှုံးမှုများအားတယ်လီနောမှ တာဝန်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူခြင်းမပြုရ။
၂၂။ တယ်လီနောမှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများအားလဲလှယ်ပေးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း နှင့် ငွေကြေးအစားထိုးပေးအပ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်။ဆုလက်ဆောင် ရရှိသူမှ မိမိလက်အတွင်းဆုလက်ဆောင် ရရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် မိမိကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ် ချက်ဖြင့် သင့်တော်သလိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆုလက်ဆောင်ပေါ်တွင် သက်မှတ်ထားသည့် နေ့ရက်မတိုင်မီအသုံးပြုရန် (သို့) လက်ခံရရှိရန် ပါရှိပါကဆုလက်ဆောင် ရရှိသူမှ အဆိုပါနေ့အားထပ်မံသက်တမ်းတိုးခြင်း (သို့) အစားထိုးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းမပြုနိုင်ပါ။တယ်လီနောမှ ပေးအပ်သောလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအတွက် အာမခံပေးခြင်းများ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်။ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ခွင့်ရှိသူ မှ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားနားလည်ပြီးလိုက်နာရန် သဘောတူညီသည်ဟုမှတ်ယူခြင်း ပြုမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရရှိသည့် ဆုလက်ဆောင်အတွက် အခွန်ပေးအပ်ရခြင်းများရှိ ပါက အဆိုပါ အခွန်ပေးအပ်ခြင်းမှာကံထူးရှင်၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
၂၃။ဤကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ခြင်းဖြင့် တယ်လီနောမှ ကံထူးသူ၏ရုပ်ပုံ၊ အသံတို့အားအသုံးပြု၍ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း၊ အင်တာဗျူး ပြုလုပ်ခြင်း၊ လှုမှုကွန်ယက်များတွင်ဖြစ်စေ၊ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လွှင့်တင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အခြားကြော်ငြာ လက်ကမ်းစာစောင်တွင်ဖြစ်စေ၊ ပိုစတာ တစ်မျိုးမျိုးတွင်ဖြစ်စေရိုက်နှိပ် ဖော်ပြခြင်းများ အားဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
၂၄။ တယ်လီနောမှ မိမိကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကံစမ်းမဲပုံစံ နှင့် ဆုမဲများအားပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။
၂၅။ တယ်လီနောမှ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခြေအနေထက်ပိုသော ကိစ္စရပ်များအတွက်ကံထူးသူမှရရှိမည့့် ဆုမဲများအား တယ်လီနောမှ လဲလှယ်ခွင့် နှင့် အခြား ဆုမဲများ အစားထိုးပေးအပ်ခွင့်တို့ရှိသည်။
၂၆။ ဤကံစမ်းမဲအစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းကာအငြင်းပွားဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါကတယ်လီနောမြန်မာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကသာအတည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၇။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ချိုးဖောက်သော သူတို့အား တယ်လီနောမှ ကံစမ်းမဲတွင် ပါ၀င် ကံစမ်းရန် ငြင်းပယ်ခွင့်၊ ဆုလက်ဆောင်များပေးအပ်ရန် ငြင်းပယ်ခွင့်များအပြည့်အဝရှိသည်။
၂၈။ တယ်လီနောမှ လိုအပ်သည်ဟုထင်မြင်သည့် အတိုင်းဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနှင့်် ကံစမ်းမဲ အစီစဉ်များအားအချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်၊ ပယ်ဖျက်နိုင်ခွင့်၊ ဆိုင်းငံ့နိုင်ခွင့်နှင့် ပြင်ဆင် နိုင်ခွင့် တို့ရှိသည်။
၂၉။ကံထူးသူမှာတယ်လီနောမှ လိုအပ်မည်ဟုထင်မြင်ယူဆသည့် စာရွက်စာတမ်းများအားလက်မှတ်ထိုးခြင်း၊ တင်ပြခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
၃၀။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများမှလွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်ပြီး၊ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရားရုံး၏စီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
၃၁။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများသည် မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ၂ဘာသာရှိရာ ၄င်းတို့၂ခုကြား ကွဲလွဲမှုရှိပါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာအတည်ဖြစ်သည်။
1.မြွေလှေကားဆော့၍ မဲပေါက်သော Menu များအား Customer များအသုံးပြုမည်ဆိုပါက မိမိဖုန်းရှိ Message Boxသာ ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
2. Message အား Screen Shot ရိုက်၍ Viber နှင့် Share သုံးခြင်းမရပါ။
3. မဲပေါက်ထားသော Menu တစ်မျိုးစီကို သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏအားပြည့်မှသာ စားသုံးခွင့်ရှိပါသည်။ Message2မျိုးမဲပေါက်ပါက သတ်မှတ်ထားသော ငွ Amount (2) ခါ ပည့်အောင်စားသုံးမှသာ menu နှစ်မျိုးရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
4. Expire Date ကျော်လျှင် အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။
5. YKKO ဆိုင်ခွဲမရှိသောမြို့များတွင် မဲပေါက်သော menu အား ငွသားဖြင့် လဲလှယ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ( Shop.com.mm )
၂။ ဘောင်ချာနံပါတ်သည် SMS လက်ခံရရှိသည့်နေ့ မှစတင်ကာ (၁၄) ရက်အတွင်း အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
၄။ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရန်အတွက် ထည့်သွင်းထားသောလိပ်စာသို့သာပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
၅။ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရာတွင် SHOP ၏လက်ရှိပို့ဆောင်နေသောနေရာဒေသများသို့သာပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ လက်ရှိပို့ဆောင်နေသောနေရာဒေသများဖြစ်ပါက SHOP မှ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လာမည်ဖြစ်ပြီးနီးစပ်ရာပို့ဆောင်နိုင်သောနေရာဒေသသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
၇။ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆော်ခအနေဖြစ် မည်သည့်တန်ဖိုးမျှပေးရန်မလိုပါ။
၈၊ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရန် ရုံးဖွင့်ရက် (၅) ရက်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
၉။ ကုန်ပစ္စည်မရရှိသေးခင်အချိန်ကာလတွင် ပို့ဆောင်ပစ္စည်း၏ အခြေအနေအားထိုနေရာတွင်စစ်ကြည့်နိုင် ပါသည်။
၁၀။ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား နှင့် အရောင်အားရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။
၁၁။ ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် တစ်ခုတည်းကိုသာရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၁၂။ ဝယ််ယူသူများအနေဖြင့်ပျက်စီးသောပစ္စည်းများအား ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေဖြင့်ထိုပစ္စည်းအားပယ်ဖျက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ထိုပစ္စည်းအားရန်ကုန်ရုံးချုပ်သို့ရောက်သည့်နေ့မှစပြီး၁၅ရက်အတွင်း shop.com.mm ရုံးချုပ်တွင် ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်
၁၃။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင် ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိရန်အတွက် မိမိပို့ဆောင်စေသောဖုန်းနံပါတ်မှန်ကန်စွာထည့်သွင်းခြင်းနှင့် လိပ်စာအတိအကျထည့်သွင်း ခြင်းကိုသေချာစွာလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
၁၄။ အကယ်၍ မိမိ၏ကုန်ပစ္စည်းကိုလာရောက်ပို့ဆောင်ချိန်တွင် အပြစ်အနာအဆာတွေ့ရှိပါက (သို့မဟုတ်) ပျက်စီးယိုယွင်းနေပါက SHOP ၏ return windowမှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ကုန်ပစ္စည်း ၏အမျိုးအစားနှင့် အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသည် ပြန်လည်လဲလှယ်ရန်အတွက် Conditons for returns နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ်ရာမေးမြန်းလိုပါက ၀၁ ၅၁၂၃၄၅ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (Singapore Airline)
ရှယ်ဆော့ရှယ်ရမြွေလှေကားဆိုတာMyTelenor App မှာသာရရှိနိုင်တဲ့ Lucky Draw Campaign တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ (Prepaid အသုံးပြုသူများအတွက်သာ)။ Customer များသည်နေ့စဉ်လက်ငင်းဆုများနှင့် ကံစမ်းမဲကာလအပြီးတွင် ဆုကြီးများရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ Telenor ၏ မည်သည့် Channel မှမဆို ((App, Wowbox, USSD, SMS and Eload…etc) Package ၀ယ်ယူရပါမည်။ ပြီးလျင် MyTelenor App ရှိ Snake & Ladder ကဒ်ကိုနှိပ်ပြီးအံစာတုံးပစ်ခွင့်ရယူရပါမည်။ Package ၀ယ်ယူပြီး ရရှိနိုင်မည့်အံစားတုံးပစ်ခွင့်အရေအတွက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
• ၄၀၀ ကျပ်အောက် = အံစာတုံးပစ်ခွင့် ၁ ကြိမ်
• ၄၀၀ နှင့် ၁၀၀၀ ကြား = အံစာတုံးပစ်ခွင့်၂ ကြိမ်
• ၁၀၀၁ နှင့် ၃၀၀၀ ကြား = အံစာတုံးပစ်ခွင့်၃ ကြိမ်
• ၃၀၀၀ ကျပ်အထက် = အံစာတုံးပစ်ခွင့်၅ ကြိမ်
Package ၀ယ်ယူပြီး ၄၈ နာရီအတွင်းMyTelenorသို့ဝင်ရောက်ပြီးအံစာတုံးပစ်ခွင့်များကိုရယူရမည်။ အသုံးမပြုရသေးသောအံစာတုံးများသည် ကံစမ်းမဲကာလအပြီးတွင်ပယ်ဖျက်သွားမည်။
အံစာတုံးပုံလေးအားနှိပ်ပြီးပစ်ရမည်။ ၁ ခါပစ်ပြီးပါကအကြိမ်အရေအတွက် ၁ ခုလျော့သွားမည်။
(YKKO)အနည်းဆုံး ၁၂,၅၀၀ ကျပ်ဖိုးသုံးစွဲပြီး ကြက်သားဆီချက် (၂,၅၀၀ တန်ဖိုးရှိ) ၁ ပွဲရယူခွင့်
(YKKO) အနည်းဆုံး ၁၂,၅၀၀ ကျပ်ဖိုးသုံးစွဲပြီး ကြက်သားဖက်ထုပ်ကြော် (၂,၂၀၀ တန်ဖိုးရှိ) ၁ ပွဲရယူခွင့်
(YKKO) အနည်းဆုံး ၁၂,၅၀၀ ကျပ်ဖိုးသုံးစွဲပြီး Strawberry Ice Cream ၁ ပွဲရယူခွင့်
(Oway) အနည်းဆုံး ၄၀,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးသုံးစွဲပြီး ၅,၀၀၀ ကျပ်လျော့စျေး (ပြည်တွင်းလေယာဉ်လက်မှတ်များအတွက်)
(Oway) အနည်းဆုံး ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးသုံးစွဲပြီး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်လျော့စျေး (ပြည်ပလေယာဉ်လက်မှတ်များအတွက်)
(Oway) အနည်းဆုံး ၃၀,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးသုံးစွဲပြီး ၅,၀၀၀ ကျပ်လျော့စျေး (ဟိုတယ်များအတွက်)
(Oway) အနည်းဆုံး ၁၅,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးသုံးစွဲပြီး ၂,၅၀၀ ကျပ်လျော့စျေး (အဝေးပြေးကားလက်မှတ်များအတွက်)
Singapore Airline မှလေယာဉ်လက်မှတ် (USD ၁,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ)
ကံစမ်းမဲကာလကရက် ၉၀ ဖြစ်ပါသည်။ 1st Aug မှ29th Oct 2019အထိ
ရှယ်ဆော့ရှယ်ရမြွေလှေကားကိုMyTelenor App (Version 3.8) တွင်သာရယူနိုင်ပါသည်။
500 (သို့) App ဟုပေးပိုပြီး Download Link အခမဲ့ရယူပါ
QRကို Scan ဖတ်ပါ
YKKO ၏ကူပွန်သည် ရရှိသည့်နေ့မှ 7ရက်အတွင်းအသုံးပြုရမည်။
OWAY ၏ကူပွန်သည် ရရှိသည့်နေ့မှ 7-Nov-19 ရက်မတိုင်မီအတွင်းအသုံးပြုရမည်။
SHOP ၏ကူပွန်သည် ရရှိသည့်နေ့မှ 14ရက်အတွင်းအသုံးပြုရမည်။
YKKO နှင့် Owayမှကူပွန်များကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။
YKKO မှ ကူပွန်အတွက်မည်သည့် YKKO ဆိုင်ကိုမဆိုသွားရောက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Oway မှ ကူပွန်အတွက် Oway ၏ Website (သို့) App တွင်ရယူနိုင်ပါမည်။
SMS တွင်ပါ၀င်သော Link မှဝင်ရောက်ပြီးကူပွန်ကိုအသုံးပြုရပါမည်။
ဂိမ်းကိုပြီးဆုံးအောင်မြင်ပြီးကူပွန် ၁ စောင်ရရှိပါသည်။ ဆုကြီးပေါက်မပေါက်မည်သို့သိရှိမည်နည်း။
ကံစမ်းမဲကာလပြီးဆုံးပါကဆုကြီးပေါက်သည်သူများကို နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နေ့တွင်ရွေးချယ်ပြီးဆက်သွယ်ပါမည်။ ဆုကြီးပေါက်သည့်သူစာရင်းတွင်ပါ၀င်ပါက Telenor မှဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး Telenor ၏ website https://www.telenor.com.mm/snakeandladder တွင်လဲဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
SHOP website မှ redeem လုပ်ထားသောလက်ဆောင်ပစ္စည်းမရရှိသေးပါ။
ရယူထားသောပစ္စည်း၏ status ကို SHOP website တွင် Tracking id (သို့) ဖြည့်သွင်းလိုက်သောဖုန်းနံပါတ်အားထည့်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ စစ်ဆေး၍မရရှိပါက Telenor (သို့) SHOP သို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
Snake and Ladder ဂိမ်းပေါ်ရှိနောက်ဆုံးအကွက် နံပါတ် (၃၀) ကိုနှိပ်ပြီးအသေးစိပ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ Telenor website https://www.telenor.com.mm/snakeandladderတွင်လဲဝင်ရောက်ဖတ်နိုင်ပါသည်။
အောက်ပါ Link မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်ကိုကြည့်နိုင်ပါသည်။ https://www.telenor.com.mm/snakeandladder
Checkout လုပ်မည့်အဆင့်တွင် Voucher code ကိုထည့်ပြီး Apply နှိပ်ကာ discount/လက်ဆောင်အားရယူနိုင်ပါသည်။
Cash on Delivery ကိုရွေးပြီးပါကထပ်မံငွေပေးချေရန်လိုအပ်ပါလား။
ကူပွန် ၁ ခုအတွက် ပစ္စည်းဘယ်နှစ်ခုရရှိမှာလဲ။
ကူပွန်ကုဒ် ၁ ခုတွင် ပစ္စည်းတစ်မျိုးသာ။
ရရှိသောပစ္စည်းတွင် Warranty ပါမည်လား။
Warranty ပါ၀င်ပါမည်။ပစ္စည်းအရ Warranty ရရှိမည့့်ကာလာကွဲပြားပါမည်။
Delivery ပေးပို့မည့်အချိန်ထက်နောက်ကျပြီးမရရှိသေးပါက Telenor Customer Service (သို့) SHOP.com.mm customer service သို့ Live Chat, service@shop.com.mm နှင့် Phone number (95) 09 969 965500 များသို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Shop.com.mm မှဖုန်းဆက်အကြောင်းပါမည်။ မိမိထည့်သွင်းထားသောလိပ်စာတွင်ပစ္စည်းလက်ခံရယူမည့်သူတစ်ရောက်ရှိနေရပါမည်။
ဆုလက်ဆောင်ကိုစစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးပါကမှာယူပြီး ၃ ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်းပေးပို့ပါမည်။ သို့သော် အချို ့နေရာများတွင် ၅ ရက်ထက်ပိုကြာနိုင်ပါသည်။
ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ပါသည် (သို့) ပစ္စည်းတွင် warranty ပါ၀င်သောကြောင့် Service Center သို့လည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ မည်သို့လဲလှယ်ရမည်ကို Shop.com.mm customer service သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
လဲလှယ်မည့်ပစ္စည်းကို ပြန်လည်ပေးပို့ပြီးမည်သို့ ပစ္စည်းပြန်လည်ရရှိပါမည်နည်း
Shop.com.mmရှိ customer service သို့ဆက်သွယ်ပြီးပစ္စည်းပြန်လည်မှာယူရပါမည်။ Agent မှ Voucher Code နှင့် ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုရှင်းပြပေးပါမည်။